Tag: mifanohitra | Martech Zone
Raha vantany vao hitako mifanohitra amin'ny fampiasa amin'ny lohatenin'ny lahatsoratra iray amin'ny marketing, somary somary somary somary somary saro-kenatra aho Ity infographic eto ambany avy amin'ny Devesh Design ity dia miasa tsara amin'ny fametrahana ny fomba ilain'ny mpanjifa mampiasa mailaka ho an'ny orinasany. Tsy manana fisalasalana momba ny herin'ny mailaka aho ary ny fahaizany amin'ny maha teknolojia marketing tosika mba handrisihana ny mpamandrika handray andraikitra. Mety izany… ary tokony ho toy izany ny olon-drehetra
Tsy azoko antoka hoe oviana i Heat no nanamboatra an'ity inforgraphic ity, saingy tsara loatra izany raha nilaiko nizara izany. Ny antony maha-tsara azy dia satria fijery marina sy fampitahana ny fampiasan'ny matihanina marketing amin'ny media sosialy mifanohitra amin'ny salan'isa, olona tsy marketing. Tsy mino aho fa ampy ny mpitarika ato amin'ity indostria ity maneho sary marina momba ny fampiasana media sosialy. Ny maro amin'izy ireo dia mampatsiahy ahy ny fahazoana mpiambina maika any. Tokony hataontsika
Influencer Outreach Versus Advocacy
Asabotsy, Aprily 13, 2013 Alarobia, Martsa 8, 2017 Douglas Karr
Jay Baer dia iray amin'ireo mpiteny sy mpanoratra marketing lehibe itodihako. Vao tsy ela akory izay izy no nanoratra lahatsoratra bilaogy mahafinaritra iray sy infographic izay manome fampitahana be dia be ny influencers amin'ny mpisolo vava marika. Ny fanentanana ny Influencer dia singa iray lehibe amin'ny programa media sosialy sy programa fifandraisana maoderina. Saingy matetika izy ireo dia tsy mahomby amin'ny fitondran-tena mitondra fiara mihoatra ny resaka sosialy. Nanoratra lahatsoratra iray momba ny antony mahatonga an'izany aho, antsoina hoe Why Online Influencer